Aimbova purezidhendi weAfghanistan anogara muUAE nemari inosvika 169 miriyoni yemari yakabiwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Aimbova purezidhendi weAfghanistan anogara muUAE nemari inosvika 169 miriyoni yemari yakabiwa
Afghanistan Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
IUAE Ministry Ministry yekune dzimwe nyika uye International Cooperation inogona kusimbisa kuti iyo UAE yakagamuchira Mutungamiri Ashraf Ghani nemhuri yake kupinda munyika nezvikonzero zvevanhu.
Mutungamiri akadzingwa muAfghanistan anobuda muUAE.
Ashraf Ghani ari kupomerwa mhosva yekuba madhora zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emadhora kubva muhomwe yeAfghanistan.
UAE "yakagamuchira" Ghani nemhuri yake "pane zvekubatsira".
United Arab Emirates 'Ministry yekune dzimwe nyika yaburitsa chirevo nhasi ichizivisa kuti nyika yatora vaimbove mutungamiri wenyika yeAfghanistan, Ashraf Ghani nemhuri yake "nezvikonzero zvekubatsira" mushure mekunge mutungamiri akadzingwa atiza Afghanistan neSvondo apo maTaliban akasvika kuKabul.
Ashraf Ghani nemhuri yake vagara zvino Abu Dhabi, guta guru reUAE.
"Bazi reUAE rezvekunze uye kudyidzana kwenyika dzinogona kusimbisa kuti UAE yakatambira Mutungamiri Ashraf Ghani nemhuri yake kupinda munyika nezvikonzero zvekubatsira vanhu," chirevo chipfupi, chakatumirwa kune webhusaiti yeUAE Ministry Ministry inoverengwa zvizere.
Ghani akatiza Afuganisitani Maawa akati wandei kufamba kwechikwata cheTaliban chisati chapinda muKabul pasina kusangana nekupokana.
Hazvisi pachena kuti ndeipi nzira yaakafamba kuenda kuUAE kana paakasvika ikoko. Pakutanga, Kabul News yakati yakamira muOman, maakasvika achibva kuTajikistan. Pepanhau Hasht-e Subh Mazuva ese Ghani akati akapinda muOman achibva kuUzbekistan.
Akasiya guta guru reAfghanistan pamwe chete nemukadzi wake Rula Ghani nevamwe vanhu vaviri, vachinzi vakatora madhora zviuru gumi nemazana mapfumbamwe emamiriyoni emari yakabiwa. Sekureva kweMumiriri weRussia muKabul, Ghani akaedza kubuda nemari yakawanda zvekuti yaisakwanisa kukwana muherikoputa yake uye vamwe vaitofanira kusiiwa kunhandare yendege.
Mumiriri weAfghanistan kuTajikistan Muhammad Zohir Agbar akati Mutungamiri weAfghan Ashraf Ghani akatiza munyika, achienda naye madhora zana nemakumi mapfumbamwe nemana emadhora kubva kuhomwe yenyika.
Mumiriri akadana kupunyuka kwemutungamiri wenyika yeAfghan kuti "kutengesa nyika nenyika" uye akawedzera kuti Ghani akaba madhora zviuru gumi nemazana mapfumbamwe nemapfumbamwe kubva kuechuma.
Sekureva kwemumiriri, achakwidza nyaya kuInterpol nechikumbiro chekusunga Ashraf Ghani vomuunza kudare repasi rese.
Vamwe vakuru-vakuru uye vezvematongerwo enyika vakatevera Ghani mukusiya nyika, pakati pavo, Marshal Abdul-Rashid Dostum, naAtta Muhammed Nur, vakambotaura nezvehondo kuTaliban mudunhu reBalkh, aimbova mutevedzeri wemukuru weNational Security Council Serur Ahmad Durrani, aimbova Gurukota rezveDziviriro Bismillah Mohammadi nemukuru wemauto mudunhu reHerat Mohammad Ismail Khan.
Steven Malarski anoti:
Nyamavhuvhu 18, 2021 pa16: 16
Hapana chinoshanduka. Chii chingadai chakatarisira !!